Myanma Gazette ပြက္ခဒိန် (၂၀၁၅-၂၀၁၆) Update 2015/09/10 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » Myanma Gazette ပြက္ခဒိန် (၂၀၁၅-၂၀၁၆) Update 2015/09/10	47
Posted by ムラカミ on Sep 10, 2015 in Arts & Humanities, Business & Economics, Know-How, DIY, Myanmar Gazette | 47 comments
တောတွင်းပျော် အိုင်ဒီယာပေးပြီး အလင်းဆက် စလိုက်တဲ့ Myanma Gazette ပြက္ခဒိန် ကိစ္စ အတော်လေး ခရီးရောက်နေပြီမို့
လက်ရှိ အနေအထား ကို အစီရင်ခံရင်း (လိုရင်း) ဓာတ်ပုံ တောင်းခံတဲ့ ကိစ္စ ကို ပိုစ့်အဖြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံမတောင်းခံခင် ယနေ့(၂၀၁၅/၀၉/၁၀) ကြာသပတေး နေ့လည် အထိ နောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်ကတော့…
၂၀၁၅-၂၀၁၆ မြန်မာ့ဂဇက် ပြက္ခဒိန်
အရေအတွက် – ၃၀၀ ခု
တခု ကျသင့်ငွေ – ၂၅၀၀ ကျပ် မေးထားတဲ့ အော့ဖ်ဆက်တွေ ဈေးမကွာသမို့ အနီးစပ်ဆုံး တခုကို Printing ကျသင့်ငွေ ၂၄၀၀ ကျပ် နဲ့
အခြား အထွေထွေစားရိတ်(ကားခ စသည်) ၁၀၀ကျပ် နဲ့
စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုစားရိတ် ၂၅၀၀ ကျပ် ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ခုရေ ၃၀၀ အတွက် စုစုပေါင်း ကုန်ကျငွေ ၇၅၀,၀၀၀ (ခုနစ်သိန်း ငါးသောင်း) ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။
သည်ငွေပမာဏ ကို ကာမိစေဖို့ ၀င်ငွေလမ်းကြောင်း ၃ခု ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့
၁) စေတနာရှင်များရဲ့ အလှူငွေ
၂) ကြော်ငြာရှင်များ ဆီက ကြော်ငြခ
၃) ရွာသူားများထံ ပြက္ခဒိန် ရောင်းချခ ဖြစ်ပါတယ်
အောက်မှာ အသေးစိတ် ဖော်ပြထားပါတယ်
သူကြီး – ၁၀၀,၀၀၀ (တစ်သိန်း) ကျပ်
ဦးကျောက် – ၁၀၀,၀၀၀ (တစ်သိန်း) ကျပ်
အန်တီဒုံ – ၁၀,၀၀၀ (တစ်သောင်း) ကျပ်
ကိုထူးဆန်း – ၅၀,၀၀၀ (ငါးသောင်း) ကျပ်
မKZ – ၅၀,၀၀၀ (ငါးသောင်း) ကျပ်
ကိုရင်စိုင်းခမ်း – ၅၀,၀၀၀ (ငါးသောင်း) ကျပ်
တာတွင်းပျော် – ၅၀,၀၀၀ (ငါးသောင်း) ကျပ်
စုစုပေါင်း ၄၁၀,၀၀၀ (လေးသိန်း တစ်သောင်း) ကျပ် တိတိ လှူမယ်ဆိုပြီး ကြားသိ ရပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
Update အနေနဲ့ ကနေ့ညနေပဲ ဦးပါ ကို အန်တီဒုံ ဖုန်းဆက်လို့ လှူဖို့ ဖိတ်ခေါ်ရာမှာ လှူပါ့မယ် ဆိုတဲ့အပြင်
ဦးမိုက် ကိုပါ လှမ်း သံချောင်းခေါက်ပေးပါမယ်လို့ ပြောသေးသဗျ။ (ဘေးမှာ အန်တီမမ သက်သေရှိ။)
စေတနာသဒ္ဒါပေါက်လို့ နောက်ထပ် လှူဓါန်းလိုသူများ ရှိဦးမယ် ဆိုရင်လည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
အန်တီမမ – ၄၀,၀၀၀ (လေးသောင်း) ကျပ် (ဇန်န၀ါရီ)
ဦးကျောက် – FOC (ဖေဖော်ဝါရီ)
မခိုင်ဇာ – ၁၈၀,၀၀၀ (တသိန်း ရှစ်သောင်း) ကျပ် (မတ်၊ သြဂုတ်၊ ဒီဇင်ဘာ) (3Months) + Cover Sponsor(Cover Ad)
မသဲ – ၄၀,၀၀၀ (လေးသောင်း) ကျပ် (ဇူလိုင်)
မနိုဗီ – ၄၀,၀၀၀ (လေးသောင်း) ကျပ် (နိုဝင်ဘာ)
သူကြီး – FOC (?)
အန်တီဒုံ – ၄၀,၀၀၀ (လေးသောင်း) ကျပ် (စက်တင်ဘာ)
Mလုလင် – ၄၀,၀၀၀ (လေးသောင်း) ကျပ် (ဇွန်)
စုစုပေါင်း ကြော်ငြာခ ၃၈၀,၀၀၀ (သုံးသိန်း ရှစ်သောင်း) ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။
သဂျီး နဲ့ ဦးကျောက် ကိုတော့ အလှူငွေ ၁သိန်းစီ ထည့်ထားတဲ့အတွက် တယောက် တလစီ FOC ကြော်ငြာထည့်ပေးတာပါ။
ကြော်ငြာ ခက တလစာ (ပြက္ခဒိန် ၁ရွက်စာ) အတွက်က ၄၀,၀၀၀ (လေးသောင်း) ကျပ် ပါ။
မျက်နှာဖုံး ကြော်ငြာ ကတော့ ၆၀,၀၀၀ (ခြောက်သောင်း) ကျပ် ပါ။
၀င်ငွေလမ်းကြောင်း ၁နဲ့ ၂ အပြီးမှာ ထုတ်လုပ်မှု စားရိတ် ကို ကာမိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ၇၉၀,၀၀၀ (ခုနှစ်သိန်း ကိုးသောင်း) ကျပ်။
ဒီငွေက စာရင်းရှိ ပိုက်ဆံ သာဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ လက်ထဲ ရောက်ပြီးသား ငွေ ကတော့- (၂၀၁၅/၀၉/၁၀ – ညပိုင်းအထိသာ)
၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (မခိုင်ဇာ အလှူ + ကြော်ငြာခ) – မဝေ
၅၀,၀၀၀ ကျပ် (တောတွင်းပျော် အလှူ) – အလင်းဆက်
၁၃၀,၀၀၀ ကျပ် (မမ၊ အာတီဒုံ၊ မသဲ ကြော်ငြာ) – မိဂီ
ကြော်ငြာ စုစုပေါင်း ၁၀လစာ နဲ့ နောက်ထပ် ၂လစာ (ဧပြီ၊ မေ) လိုနေသေးတဲ့အတွက် ကြော်ငြာ ဆက်လက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ကြော်ငြာ ဆက်ပြီး ဖိတ်ခေါ်လို့ မရတော့မယ့်အဆုံးမှာ ရွာထဲကနေ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်တဲ့
Dozen Plus တို့ ဆရာလေးကိုထွန်းဝင်းလတ် ရဲ့ ကျောင်းအလှူတို့ အန်တီဒုံတို့ရဲ့ သင်္ဂဟမေတ္တာ (၀ါးခယ်မ) အလှူအဖွဲ့တို့
စတာတွေကို အခမဲ့ ထည့်သွင်းသွားမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ (Organizers တွေကတော့ ကလင်ဒါ များများ အားပေးကြပေါ့ဗျာ)
ခုရေ ၃၀၀ ထုတ်ရင် တခုချင်းစီ ၂၅၀၀ ကျပ် ကျသင့်ပေမယ့် ၇၅၀,၀၀၀ (ခုနှစ်သိန်း ငါးသောင်း) ကျပ် ကျသင့်သမို့
ငွေစာရင်းအရ ၄၀,၀၀၀ (လေးသောင်း) ကျပ် ပိုပါတယ်။
ခုရေ ၃၀၀ မှာ ကြော်ငြာရှင်တွေကို တယောက်(တလစာအတွက်) ကလင်ဒါ ၁၀ခုစီ လက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မျက်နှာဖုံး ကြော်ငြာ နဲ့ အခြား ပေးဖို့တွေ ပေါင်းလိုက်ရင် ထုတ်လုပ်တဲ့ထဲက ခုရေ ၁၅၀ လောက် ကုန်မှာပါ။
ကျန်ခုရေ ၁၅၀ ကိုတော့ ရွာသူားတွေ ကို ရောင်းမယ် စိတ်ကူးပါတယ်။
တခုစီကို အကြမ်းဖျဉ်း ၂၀၀၀ (နှစ်ထောင်ကျပ်) နှုန်း နဲ့ ရောင်းချမယ် စိတ်ကူးပါတယ်။
အခု ၁၅၀ ဆိုတော့ အကုန်ရောင်းရတဲ့အခါ ၃၀၀,၀၀၀ (၃သိန်း) ကျပ် ရရှိမှာပါ။ (အပေါ်ကဘတ်ဂျက် ပိုငွေ ပါ ထည့်ပေါင်းပါဦးမယ်)
သည်အမြတ်ငွေ ကိုတော့ နောင် လာလတ္တံ့သော ရွာ့စုပေါင်း အလှူ တွေ့ဆုံပွဲ စတာမျိုးတွေမှာ သုံးမယ် လို့ စိတ်ကူးပါတယ်။ နောင်မှာ အသေးစိတ် တိုင်ပင်ပါမယ်။
တလက်စတည်း ဆက်ပြီးတိုင်ပင်ချင်တာကတော့ ခုရေ ၃၀၀ ရိုက်မယ်ဆိုပေမယ့် ၀ယ်လိုအား (လက်ဆောင်ပေးစရာ ကမ်းစရာ) များမယ် ဆိုရင်တော့
ခုရေ ၅၀၀ ရိုက်ဖို့ ဈေးနှုန်းပြင်ဆင်ဖို့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ခုရေ ၅၀၀ ရိုက်နှိပ်ခ က စုထားတဲ့ ငွေထက် ပိုမိုတာမို့ ရောင်းမကုန်ခင် စိုက်ပေးမယ့်လူ လိုအပ်ပါမယ်။
သည်အကြောင်းလေးတွေ ကောမန့် အနေနဲ့ ဆွေးနွေးကြစေလိုပါတယ်။
(အော့ဖ်ဆက် တွေကိုလည်း လက်ရှိ စုံစမ်းထားတာအပြင် အသစ်ထပ်ပြီးလည်း စုံစမ်းလက်စ ရှိနေပါသေးကြောင်း)
ထုတ်လုပ်မှုစားရိတ် ကြော်ငြာ အချက်အလက် နဲ့ ဒီဇိုင်း ပိုင်း အတိုင်းအတာ တခုထိ ပြီးစီးလုပြီ မို့
ရွာသူား ဓာတ်ဆြာတွေဆီက ရွာ့ပြက္ခဒိန် မှာ အသုံးပြုဖို့ ဓာတ်ပုံ အလှူခံလိုပါတယ်။
အသေးစိတ် အချက်အလက် ကတော့ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးရောင်စုံ ဖြစ်ရပါမယ်။ Orientation က Landscape ပါ။
ရှုခင်းပုံ အမျိုးအစားလို့ အကြမ်းဖျဉ်းပြောနိုင်ပါတယ်။
သဘာဝ တောတောင်ရေမြေ ဆိုတာအပြင် လူလုပ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ ရှေးဟောင်း အဆောက်အဦများ ကျေးလက် လူနေမှုဘ၀များ လည်း အကျုံးဝင်ပါတယ်
မြန်မာဆိုတာ ပြနိုင်တဲ့ still-life တွေဖြစ်တဲ့ (ရုပ်သေး၊ ဆွမ်းအုပ်၊ ဆိုင်းဝိုင်း၊ ဇာတ်ပွဲ၊ တိုးနယား၊ ပုသိမ်ထီး၊ ကွမ်းအစ်၊ သနပ်ခါး၊ လှည်းယာဉ်၊ လက်ဖက်၊ ယွန်းဗန်း၊ ပန်းဆယ်မျိုး လက်မှုလုပ်ငန်းများ) စသည်တို့ အကျုံးဝင်ပါတယ်။
ဘာသာရေး ဆိုတဲ့ဘောင် မပါဝင်စေချင်လို့ သာသနိက အဆောက်အဦမျိုးတွေ ရှောင်စေချင်ပါတယ်။
jpg အမျိုးအစား ဖိုင် ဖြစ်ပြီး (ဖြစ်နိုင်ရင်) 120 dpi လောက်တော့ လိုချင်ပါတယ်
နံရံကပ် မဟုတ် စားပွဲတင် ပြက္ခဒိန်မို့ အကြမ်းဖျဉ်းတော့ 4″x6″ အရွယ်အစား ပုံမှန် ဓာတ်ပုံထုတ်လို့ရလောက်တဲ့ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုမျိုး နဲ့ ဆို လုံလောက်ပါပြီ။
အခြား ပုံနှိပ်မီဒီယာ တနေရာရာမှာ ပုံနှိပ်ထား ရောင်းချထား ပေးအပ်ထားတာမျိုး မဟုတ်တဲ့ ပုံ အသစ်မျိုး ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ (ကာယကံရှင်ရဲ့ FB မှာတင်ထားတာမျိုး သုံးထားယုံ လောက်တော့ ပြသနာမရှိပါဘူး)
ဓာတ်ပုံဆြာ ရဲ့ signature ထိုးမထားတဲ့ပုံမျိုး ဖြစ်နိုင်ရင် လိုချင်ပါတယ်။ (ဓာတ်ဆြာ ပေါင်းစုံရဲ့ တယောက်ချင်းစီရဲ့ sign ထိုးပုံ နေရာ စာလုံး နဲ့ ရုပ်ပုံတွေ ကွာခြားတာမို့)
ကလင်ဒါအနေနဲ့မှာ တလနဲ့ တလ Uniform မဖြစ်တော့ဘဲ harmony ပျက်စေမယ် ယူဆလို့ပါ။
ဘယ်ပုံကို ဘယ်သူ ရိုက်တယ် ဆိုတာကတော့ ပုံအောက်မှာ သီးခြား စာသားထိုးဖော်ပြပြီး Credit ပေးပါမယ်။
ဓာတ်ဆရာတယောက်ကို အများဆုံး ၅ပုံ အထိ ပေးပို့ စေချင်ပါတယ်။
တယောက်ဆီ စီကနေ ဘယ်နှပုံကျစီ သုံးမယ်ဆိုတာ ရယ် ဘယ်ပုံကို ဘယ်လမှာ သုံးမယ် ဆိုတာကတော့ ပုံတွေစုံတဲ့အခါကျမှ သီးခြား ထုတ်ပြန် ပါမယ်။
သတ်မှတ်ကာလ ကတော့ 21st Sept 2015 ညနေ ၆နာရီ အထိ
ပုံပို့ပြီးတဲ့အခါ ပုံပို့ပြီးတဲ့အကြောင်း ပိုစ့်အောက်မှာ Comment ရေးခြင်းဖြင့်လည်း ကူညီနိုင်ပါကြောင်းရယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: နာ့ ရဲ့ ငမျောက် ငချောက် ပုံတေရော ပို့ လို့ ရလားးး
Btw .. နာ က အခု ၅၀ ရရမှာနော်
Ma Ma says: အစားအသောက်ပုံနဲ့ ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ နာ့ပုံတွေချည်းဖြစ်မှာ သေချာတယ်။
@QUIL@ says: ၁လ ၁၀ခု ဆိုတော့ ၃ လ အတွက် ၃၀
မလောက်သေးရင် တခု ၂၀၀၀ နဲ့ ထပ် ၀ယ်အုံးညော်…
Ma Ma says: မိမိဂီ တာဝန်ကျေပါပေတယ်။ ဒီအချိန်မှာ သဂျီး ဘယ်နားသွားအိပ်ပျော်နေသလဲမသိဘူး။
အယ်လ်အေမှာ မြန်မာပြည်ကအလည်သွားသူတွေကို ၀န်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ လုပ်ငန်းမျိုးတွေက ကြော်ငြာရအောင် ၀ိုင်းမကူဘူးလား။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 390
တောတွင်းပျော် says: အိုင်ဒီယာပေးသူ နဲ့အစဖော်တဲ့ သူ ၂ယောက်က ဒီအစဉ်အစီကို ဘာအကူအညီမှ ထိထိရောက်ရောက် အကူအညီ မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးလို့ ။
ကိုဂီ ကိုအောင်မိုးသူ အ Wei အမ ခင်ဇော်တို့၎ ယောက်က ဒီအစီအစဉ်
အတွက် ဒေါင်းချာလောက်အောင် အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့ ကြတာ။
ဦးဦးပါလေရာ says: .ဒီပိုစ့်ဖတ်အပြီးမှာတော့
.(၁၀) ခု အားပေးမယ်ဖြစ်ပါကြောင်း..
.ဒီအစီအစဉ် ကမကထပြု စီစဉ်ကြသူများအားလုံးကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း…
.ဒီအစီအစဉ်ဟာ သူကြီးက (ထူးထူးခြားခြား)ချက်ချင်းတုန့်ပြန်လို့ မြန်မြန်နဲ့အဆင်ပြေပြေဖြစ်လာတာမို့
Ma Ei says: လှူမယ်ပြောထားပြီး လက်မရောက်ရသေးလို့
အလှူငွေလေးများ (ဖြစ်နိုင်ရင်) လာယူပေးကြပါနော်
Ma Ei says: 14/09/15 မှာ AYA Account ကို လွှဲလိုက်ပီနော်
kai says: ကြော်ငြာမေးပေးပါ့မယ်..။
မတည်ငွေဆိုထားတာမို့.. နကိုကတည်းက.. မတည်ဖို့ရည်ရွယ်တာပါ..။
အဲဒါကြောင့်.. စာမျက်နှာထဲ ကြော်ငြာနေရာလည်း ပြန်လှူပါတယ်…။
အလှူပြန်မခံရင်..ကကြောင့်ပေးပြီး ကြောင်ကြော်ငြာထည့်ပစ်မယ်..။ ဆိုတော့…
မြန်မာပိတ်ရက်.. လဆန်း လဆုတ်..။ ယူအက်စ်ပိတ်ရက်တွေပါရမယ်..။
@QUIL@ says: သဂျီး..
ခုနေ ခေါင်းအခဲ ရဆုံးက ကြော်ငြာ ကိစ္စခည..
၁၂လ မပြည့်ရင် ထည့်ထားပြီးသား သူတွေကို ပြန်မျက်နှာပူရတယ်ခည..
ဆိုတော့ သဂျီး မကြော်ငြာချင်ရင် ကြော်ငြာရှာပေးပါ….
ယူအက်စ် သုံးဖို့အတွက် ယူအက်စ် ပိတ်ရက်တွေ ထည့်ဖို့ ကြိုးစားပါမယ်
မြန်မာ လဆန်းလဆုတ် က အစကတည်းက ထည့်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်..
(အသေးစိတ်ကို ကနေ့ …ဒီဇိုင်နာ AMT နဲ့ စကားပြောပါမယ်) ၂၀၁၆ ပိတ်ရက် လစ်စ် လေးသာမစပါ..
အဲ့ထက် နည်းနည်းပိုရရင် ဇိုးဒီးယက် တွေနဲ့
လအလိုက် ၇ရက်သားသမီး လက္ကီးနမ်ဘာ လက္ကီးကာလာ စတဲ့ အညွှန်းလေးတွေပါ
Notes ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ထည့်သွင်းချင်သေးသဗျ..
သဂျီးဘက်က ဘယ်နှခု ယူမယ်ဆိုတဲ့ ဖြုန်းအား လေး အကြမ်းဖျဉ်းသိရရင် အဆင်ပြေမယ်ခည…
၃၀၀ ထုတ်သင့် ၅၀၀ ထုတ်သင့် ပြန်ချိန်ရမှာမို့..
ဦးကြောင်ကြီး says: https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=cat+ball&oq=cat+ball&gs_l=img.3..0l10.11811.14751.0.16037.8.8.0.0.0.0.218.1043.0j5j1.6.0….0…1ac.1.64.img..2.6.1033.rUMbi7r8uAk#tbm=isch&q=balls+cat&imgrc=x9t8jUytHDfqzM%3A
ပြထားတဲ့ပုံမျိုး ကိုယ်ဒိုင်ယိုက် ထည့်ပေးလျင် တလျှာလှူ မယ် ပြောထားတယ် အူးမာမွတ်…။
ဦးကြောင်ကြီး says: စောဒီး…. ဒီပုံမိုး ပေါသာ..
pooch says: ပုံလှူမယ် ကြိုက်ရင်သုံး မကြိုက်ရင်မသုံးနဲ့ ပြီးရင် calendar ၀ယ်မယ် မိမိဂီဆီပဲ ပုံပို့လိုက်မယ်
ဘာပုံပို့ရမလဲ ချင်းတောင်လား ရေခဲတောင်လား
အဲ့ထဲက ပုံတွေ ကြိုက်လား
@QUIL@ says: နောက်နေသလားကွယ်..
အဲ့သည့် ပိုစ့်အဟောင်းထဲက ပုံတွေအကုန် ပျက်နေတယ်..
404 File Not Found တဲ့…
pooch says: ဟုတ်လား ဒါဆို လည်း အသစ်ပို့လိုက်မယ်
သူကြီးဆိုဒ်ကလည်း အားအားရှိပျက်နေတာပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .ကိုရင်ဂီကို အားပေးတဲ့အနေနဲ့ ကြော်ငြာနှစ်လထည့်ပါမယ်…ဂျမ်ဘိုကြော်ငြာပါ
@QUIL@ says: ကျေးဇူး အထူးပါခည.
ဧပြီ နဲ့ အောက်တိုဘာ ၂လ ထည့်လိုက်ပါမယ်ခည..
ဆိုတော့ … မေ လ တလ သာ ကျန်ရှိပါတော့ဂျောင်း..
Wow says: နာ ကွကိုယ်ကြော်ငြာလို့ရလားးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: နှာ ဗိဖွံ့ယင် ဝေါင်းကို အအူးစုန်း ကြော်ငြာခွမ့် ပေးမဲ…
ကထူးဆန်း says: 7-9-2015 မှာ aya account ထဲ သို့ transfer လုပ်ထား ကြောင်းပါ ခင်ည
@QUIL@ says: ကျေးဇူးပါဗျ…
@QUIL@ says: အခုပဲ (2015/09/11 23:20 pm) မှာ ဖုန်းဝင်လာပါတယ်
နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ လ (မေလ) အတွက် ကြော်ငြာ ကို ရွာထဲမရောက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့
ဓာတ်ဆရာ ကိုစိန်သော့ မှ သူ့ သင်တန်းကြော်ငြာ ထည့်သွင်းမည် ဟု တဆင့် ဆက်သွယ်လာပါတယ်
(ကလင်ဒါအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်ပုံလည်း ပေးမည်ဟု သိရှိရပါသည်)
ဆိုတော့ ..လအလိုက် ကြော်ငြာ ပိတ်ပြီ ဖြစ်ပါသည်….
ကလင်ဒါ က ၇ရွက် စားပွဲတင် ကလင်ဒါ ကျောကပ် မို့ နောက်ဆုံး မျက်နှာဖုံး ကျော ကပ် လွတ်နေသေးပြီး ၄င်း နှင့်
တြိဂံ ကတ်ထူဘောင် ပေါ်တွင် ဘာထပ် ကြော်ငြာ ရမလဲ ဆက်စဉ်းစားနေပါသည်။
အောင် မိုးသူ says: ဒီဇိုင်းကိုလည်း အားလုံးထက် မသာရင်တောင် တန်းတူဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေပါကြောင်း
Ma Ma says: ယုံကြည်တယ် ဒီဇိုင်နာကြီးရေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3276
pooch says: ပုံတွေပို့ပြီးပြီ မေးလ်တချက်စစ်လိုက်အုန်း
ဦးကြောင်ကြီး says: တထောင်ထုပ်ဖို့ အကြံပုပါသယ်…
Ma Ma says: ကြောင်ကြီးထံမှ ကလန်ဒါ ၅၀၀ အမှာစာရပြီဖြစ်ပါ၍ တထောင်ထုတ်ရင် စီစဉ်နေပါသည်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1241
Novy says: ဒီဇိုင်းနဲ့ ကြော်ငြာအတွက်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဂဇက် ပြက္ခဒိန် အတွက် ဘဖော လှူ – ၅၀၀၀၀
kai says: ပိုက်ပိုက်က.. ပေးရတော့မှာလား..။
@QUIL@ says: အာတီဒုံ မဆက်သွယ်ဝူးလားဗျ…
သဂျီးဆီ စာပို့မယ် ပြောသာပဲ..
သည်လမကုန်ခင် အော့ဖ်ဆက် အပ်မဲ
အဲ့မတိုင်ခင် ပုံ ဒီဇိုင်း ငွေ စုံ ရင် ရပါဘီဗျာ..
အာတီဒုံမေးထားတာတောင် ကြာနေပြီ..။ ချက်ချင်းလိုမလိုမသိလို့…။
လိုရင်.. အဲဒီမှာသာ သွားယူပေတော့..။
ဘဏ်တိုက်ကြီးရေ.. ကူပါဦး..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: မောင်ဂီရေ- ဖဘ မှာမက်ဆေ့ခ်ျပို့ထားတယ်နော်။
@QUIL@ says: ဟုတ် ကျေးဇူးပါဗျ..
ဇီဇီခင်ဇော် says: မိုးသူကို အီးမေး ၄ ခု ပို့ထားတယ်။
ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် says: ဒါ့ပုံတွေ nayokkar.com မှာတင်ထားပါတယ်ဗျို့ အဲ့ထဲက ကြိုက်တဲ့ပုံပြောပါဗျ
uncle gyi says: ပထမအကြိမ်ထုတ်သာဆိုတယ်
ဦးကြောင်ကြီး says: အလဂါပေးတောင် အယူဗူးဂျ။။ အိမ်ရှုပ်လို့…. အဝှာပုံဆို တုပ်ဟုတ်ဟုတ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကြော်ငြာရှင်များ
ဒီတစ်ပတ်သောကြာ နောက်ဆုံးထား၍ အချက်အလက်များ ပေးသွင်းပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ကြော်ငြာထည့်သွင်းခများလည်း မပေးရသေးလျှင် ပေးသွင်းပါရန် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
အန်တီမမ – (ဇန်န၀ါရီ) (မောင်ဂီကို ပေးပြီး)
ဦးကျောက် – (ရပြီး)
မခိုင်ဇာ – (မတ်၊ သြဂုတ်၊ ဒီဇင်ဘာ) (3Months) + Cover Sponsor(Cover Ad) (ရပြီး)
မသဲ – (ဇူလိုင်) (မောင်ဂီကိုပေးပြီး)
မနိုဗီ – (နိုဝင်ဘာ) (မောင်ဂီကိုပေးပြီး)
အန်တီဒုံ – (စက်တင်ဘာ) (မောင်ဂီကိုပေးပြီး)
Mလုလင် – (ဇွန်)
ဦးမိုက် – (ဧပြီ၊ မေ) (ရပြီး)
– (အောက်တိုဘာ) က ကိုစိန်သော့ ကြော်ငြာမထည့်ဖြစ်ဘူးတဲ့။ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်မှာတုန်း ပြောကြဦးးး
ကျောက်စိမ်း တိန်ညင် says: အူးဝီရသူပုံနဲ့ ငဒို့နိူင်ရမည် တိုင်းပြည် ကျွက်ကြွက်ထရမည် ဆိုတဲ့ ကြော်ငြာ ထည့်ချင်ပါတယ် …..
နောက်တလကိုတော့ သြဇာသီးကိုက်ထားတဲ့ ခြင်္သေ့ပုံနဲ့ ထည့်ချင်ပါတယ် ကြော်ငြာခ ၂ဆပေးပါ့မယ်
Swal Taw Ywet says: နို ၀င်ဘာ လ နောက်ဆုံးပတ် အမိမြေ ပြန်ရောက်
ဒီဇင်ဘာလ တတိယပတ် ပြန်ထွက်ခဲ့ရမှာမို့ ရနိုင်လောက်ပါရဲ့နော။
ဂျက်စပဲရိုး says: ပြက္ခဒိန် ၄ ခု လောက် မှာချင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
ဒီဇင်ဘာ ၈ရက်နေ့ကနေ ဇန်နဝါရီ ၈ရက် နေ့ အထိတော့ မြန်မာပြည် တွင် ရှိမည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
naywoon ni says: ပြက္ခဒိန်​ ရလျှင်​​ပြောပါဗျို့ အမှတ်​တရ ၀ယ်​ပါမြီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5
Thein Kyaw Soe says: Clander ​လေးအမှတ်​တရ၀ယ်​ချင်​ပါတယ်​
Thein Kyaw Soe says: Calendar ​လေးအမှတ်​တရလိုချင်​ပါတယ်​
kai says: ထွက်ရက်ကျ.. ကြေငြာပါလိမ့်မယ်..။
မန္တလေးဆိုလည်း..လူကြုံရှိမှာပ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: (– (အောက်တိုဘာ) က ကိုစိန်သော့ ကြော်ငြာမထည့်ဖြစ်ဘူးတဲ့။ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်မှာတုန်း ပြောကြဦးးး)